Long-Haul COVID-19 Zviratidzo zveVanhu vane Rheumatic Zvirwere
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Long-Haul COVID-19 Zviratidzo zveVanhu vane Rheumatic Zvirwere
Ongororo nyowani yakaitwa nevatsvagiri pachipatara cheSpecial Surgery (HSS) muNew York City inoratidza inopfuura hafu yevarwere vane rheumatic zvirwere vakabata COVID-19 panguva yedenda uye vakapedza ongororo yeCCIDID-19, vakawana inonzi "refu-haul" COVID, kana zviratidzo zveutachiona zvenguva refu, zvinosanganisira kurasikirwa nekuravira kana kunhuwa, kurwadza kwetsandanyama uye kunetseka kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete, kwemwedzi mumwe kana kupfuura.
Zvakawanikwa zvakaonekwa kwenguva refu COVID yaive yakanyanya kukwirisa kune vanoputa, varwere vane comorbidities senge asima kana chirwere chemapapu, cancer, chirwere cheitsvo chisingaperi, chirwere cheshuga, congestive moyo kutadza kana myocardial infarction, uye avo vanotora corticosteroids.
"Kuziva kukanganisa kwedambudziko iri kwakakosha," akadaro Medha Barbhaiya, MD, MPH, rheumatologist paHSS uyo akatungamirira chidzidzo. "Kune varwere verheumatology, COVID-refu inogona kunge yakanyanya kunetsa sezvo varwere ava vatove nedambudziko rehutano risingaperi uye vanobvumidza kuferefetwa."
Dr. Barbhaiya nevamwe vake vakapa chidzidzo chavo, "Risk Factors for 'Long Haul' COVID-19 muRheumatology Outpatients muNew York City," pamusangano wepagore weAmerican College of Rheumatology (ACR).
Pachidzidzo ichi, boka raDr. Barbhaiya rakatumira ongororo kuvarume nevakadzi zviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makore gumi nemasere zvichikwira vakamborapwa kuHSS nekunyunyuta kwerheumatologic pakati pa7,505 na18. vakanga vaudzwa nachiremba kuti vakanga vabatwa nechirwere ichi.
Vatsvagiri vakatsanangura hutachiona hweCCIDID-19 kwenguva refu seavo vane zviratidzo zvinogara mwedzi mumwe kana kupfuura, nepo nyaya dzenguva shoma dzaionekwa sedzine zviratidzo zvinogara isingasviki mwedzi mumwe.
Pakati pevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevaviri vakapedza ongororo iyi, vangangoita makumi mashanu nenhanhatu muzana evarwere vakataura kuti vakabata COVID-2,572 vakati zviratidzo zvavo zvakatora mwedzi mumwe chete. Varwere vaviri chete mukudzidza ndivo vakamboongororwa fibromyalgia - mamiriro airatidzwa nekuneta, mhasuru aches uye zvimwe zviratidzo zvakabatanidzwa neCOVID-yakareba - zvichiratidza kuti kupindirana pakati pezvinetso zviviri izvi kushoma.
"Zvatikawana hazviratidze kuti zviratidzo zve fibromyalgia zviri kududzirwa zvisizvo sekurebesa COVID muvarwere vane rheumatic hosha, chiri chinhu chakasimudzwa sechinhu chinogona kuitika," akadaro Lisa A. Mandl, MD, MPH, chiremba werheumatologist kuHSS uye. munyori mukuru wechidzidzo chitsva.
Vatsvagiri veHSS vanoronga kushandisa iyo data sechikamu chekuongorora kwenguva refu kwevarwere verheumatology vane-hurefu-hurefu COVID kuona kana zviratidzo zvehutachiona zvichikanganisa mamiriro avo erheumatologic. Kuenderera mberi kwekutarisa kwevarwere ava kunopa nzwisiso yakakosha pamusoro penguva refu yekukanganisa kweCCIDID-19 muvarwere vane rheumatic chirwere.